DAAWO: Wararkii u dambeeyey xaaladda Itoobiya, Xukuumadda oo war cusub soo saartay.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Xaaladda dalka Itoobiya ayaa ka dagan maanta sidii ay ahayd 4tii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana saaka si taxadar leh u furmay dhammaan goobaha ganacsiga ee magaaladda Addis Ababa dalka Itoobiya, waxaana la arkayaa ciidamada oo kusugan jidadka muhiimka ah ee magaalada, si ay u xaqiijiyaan Amniga.
Saraakiisha nabadgalyada ayaa xalay ku hanjabay in ay talaabo adag ka qaadi doonaan kuwa kasoo horjeeda ammaanka iyo kala dambeynta oo ay sheegeen in ay adeegsanayaan sharwadayaal doonaya in ay dalka Itoobiya kala gooyaan.
Taliyaha booliska ayaa daaha ka feyday in ay jiraan shabakado dhisan oo wali kusugan gudaha dalka, kuwaas oo doonaya in ay kala dhantaalaan Itoobiya, laakiin wuxuu sheegay in ay si adag uga hortageen oo ay talaabo adag ka qaadeen.
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa shalay ka sheegay aaskii Fanaankii Oromadda in kuwii dilay iyo kuwa rabshadaha kiciyeyba ay ahaayen kuwa isku xiran oo doonayay in ay dumiyaan Itoobiya oo cadow ku ah daganaanshaha dalka.
Col, Abiy ayaa sheegay in kuwaas gacan adag lagu qabtay oo ay xaaladda wajihi doonaan.
IS BAR-BARDHIG: Booliska Puntland miyaa laga maarmay, Maxaa Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada horey joojiyey?
DHAGAYSO:Xoogsatada ku nool Garowe oo cabasho ka muujiyey ajaaniibta laga keeno dalka dibadiisa
DAAWO: Qaar kamid ah Isimadda & Waxgaradka Gobalka Mudug oo ka hadlay Dagaalkii maanta
FALANQEYN:Dhacdooyinkii ka dhacay Puntland saacadihii ugu dambeeyey saamayn maku yeelan karaan amaanka?
DHAGAYSO:Xaalada garoonka Muqdisho oo faraha ka baxday & Gumaysi cusub oo…..
XOG: Shirkii Guddiga Farsamada ee Dawlad gobaleedyada & DF oo ka furmay Muqdisho iyo Puntland oo ka maqan.
DAAWO: Kenya oo ku hanjabtay in ay taageerayso Al- Shabaab, hadii uusan M/weyne Farmaajo fasixin diyaaradaha Qaadka.
Jeneral kasoo jeeda Puntland oo xil muhiim ah looga magacaabay Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo & Axmed Karaash oo kulan xasaasi ah uga socdo Villa Somalia
DHAGAYSO:Somaliland oo qaaday talaabo aan laga filayn & Dowladda Somalia oo……
Madaxweyne Biixi oo qaabilay Wakiilka Afrika ee Shiinaha
Heshiis lagu kala saxiixan doono Saaxdheer & Wasiiro Itoobiyan ah oo ku wajahan
Somaliland oo si adag uga hadashay xilka qaadistii Khayre
Doorashooyinka Mareykanka oo cabsi looga qabo 3 dal in ay faragalin ku sameeyaan
Wasiiradii Lubnaan oo bilaabay in ay is casilaan